Wasiir katirsanaa Xukuumadda Israel oo qirtay inuu basaas u ahaa Iran
Wasiir hore uga tirsanaa dowladda Israel oo lagu eedeeyey inuu basaas u ahaa Iran, ayaa xabsi ku qaadan doona 11 sano, taasi oo qeyb ka ah heshiis dambi qirasho oo uu la galay mas’uuliyiinta, sida ay sheegtay wasaaradda caddaaladda.
Wasaaradda ayaa sheegtay in Gonen Segev uu heshiiska ogolaaday kadib markii uu qirtay inuu si xooggan ugu jaajuusay islamarkaana akhbaaraad ugu gudbay “cadowga.”
Heshiiska Segev iyo dowladda ayaa bisha soo socota la horkeeni doonaa garsoore maxkamadeed. Israel ma bixin faahfaahin intaas dheer.
Segev ayaa wasiirka tamarta ka ahaa dowladdii ra’iisul wasaare Yitzhak Rabin ee sanadihii sagaashamaadka, waxaana mar loo xabisay inuu isku dayey inuu daroogo soo geliyo Israel.
Segev ayaa bishii May ee sanaddii 2018 laga soo masaafuriyey dalka Equatorial Guinea, waxaana la xiray markii uu yimid Israel, ayada oo lagu tuhmayo inuu wakiil u ahaa sirdoonka Iran oo uu siiyey xog ku saabsan “suuqa tamarta iyo goobaha amniga Israel”
Hay’adda ammaanka gudaha Israel ee Shin bet ayaa horey u sheegtay in Segev uu laba howlwadeen oo ka tirsan sirdoonka Iran kula kulmay gudaha Iran, sidoo kalena uu wakiilo kale kula kulmay dafaaha dunida.
Madaxweynaha Falastiin oo markii Saddexaad Isbitaal la dhigay
Caalamka 21.05.2018. 17:00
Xaaladda Madaxweynaha ayaa waxaa kasoo baxaya warar kala duwan kadib markii...
Turkiga iyo South Africa oo u yeeray Safiiradooda Israel
Caalamka 14.05.2018. 23:50
Ciidamada Israel oo toogasho ku dilay Falastiini Naafo ah
Caalamka 14.05.2018. 23:46
Ciidamada Israel oo rasaas ku furay Falastiiniyiin dibadbaxayay
Caalamka 15.12.2017. 16:53
Labo Falastiiniyiin ah oo ku dhintay Duqeyn Israel ka fulisay Gaza
Caalamka 12.12.2017. 16:19
Trump oo ku dhawaaqay in Qudus ay tahay Caasimada Israel
Caalamka 06.12.2017. 21:35
Maraykanka oo looga digay in Caasimadda Israel u aqoonsado Qudus
Caalamka 04.12.2017. 09:06
Falastiin oo cambaareysay go'aanka Mareykanka
Caalamka 14.03.2019. 15:00
AFRICOM oo ka jawaabtay dhaliisha ciidanka Kenya ee weerarkii Manda 23.01.2020. 21:08
Mareykanka oo mashaariic horleh ka fulinaya degaanada Puntland 23.01.2020. 19:48
Hogaanka rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo xabsi loo taxaabay 23.01.2020. 18:34
Maxaa diirada lagu saarey kulanka Axmed Madoobe iyo Yamomoto? 23.01.2020. 18:00
XFS oo meelmarisay sharciga la dagaalanka burcad-badeeda 23.01.2020. 17:53
Karaash oo kulan la qaatay wafdi ka socday Kilinka Shanaad 23.01.2020. 16:03